Ukuzola, ukuphumla & lula-Isango leBlues
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguDonna
Wamkelekile kwindlu yethu yeendwendwe esanda kuhlaziywa ekwiihektare ezili-9 ngaphandle nje kweWaitsburg WA. Indawo entle, eyimfihlo kwaye ezolileyo enezilwanyana zasendle ezininzi. Ilungele indawo yewayini yaseWalla Walla, iiNtaba eziBlue, iiPalouse Falls, kunye neTouchet, iTucannon kunye neSnake Rivers.
Ikhitshi eligcweleyo elinezitya, iiglasi, iimbiza/iipani, izinto zesilivere, umenzi wekofu, itoaster, kunye neblender. Iwasha/isixhobo esomisa ngaphambili esinesefu ekhoyo ukuze uyisebenzise. I-WiFi kunye ne-intshi ye-55 ye-Smart TV ene-Netflix, i-Hulu, i-Amazon Prime kunye nezinye iinketho ze-TV kunye ne-Movie. Igumbi lokuhlala elinebhedi yesofa nalo linocango olutshixwayo lobumfihlo-lulungile kwizibini ezi-2 ezihamba kunye. Igumbi lokuhlambela ligcwele isixhobo sokomisa iinwele, isepha, ishampu, iconditioner kunye nelotion yomzimba. Iitawuli ezininzi kunye neelinen.
Sibekwe ngaphantsi kweemayile ukusuka eWaitsburg, WA enevenkile yokutya, ivenkile enkulu yekofu encinci, indawo yokutyela kunye neendlela ezimbalwa zokutyela. Singaphantsi kwemizuzu engama-30 yokuqhuba ukuya eWalla Walla apho unokonwabela iindawo ezininzi zewayini kunye neendawo zokutyela. Kukho iindawo zokutyibiliza, ukukhwela isikhephe, ukuloba, ukuzingela kunye nokuhamba intaba kufutshane ngokunjalo.
Sihlala endlwini kwipropathi kwaye sihlala sifumaneka njengoko kufuneka. Ikhowudi iya kunikwa ukungena kwiflethi. Ungasifumana kwipatio yethu engasemva ngorhatya oluninzi. Zive ukhululekile ukujoyina nathi ukuba uyathanda, kodwa siya kuhlonipha nemfihlo yakho.
Sihlala endlwini kwipropathi kwaye sihlala sifumaneka njengoko kufuneka. Ikhowudi iya kunikwa ukungena kwiflethi. Ungasifumana kwipatio yethu engasemva ngorhatya oluninzi. Zive ukh…